Igbo, John: Lesson 120 - Jizọs pụtara n'ihu ndị na-eso ụzọ nọ n'ọnụ ụlọ dị n'elu (Jọn 20:19-23) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 120 (Jesus appears to the disciples)
20 Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya na akụkụ ya. Ya mere ndi nēso uzọ-Ya ṅuri ọṅu mb͕e ha huru Onye-nwe-ayi.
Nbilite n'onwu nke Kraist bu ihe negosi na enwere ime ka ya na Chineke di n'udo. Chineke ahapụghị Ọkpara Ya n'ili, ọ bụghịkwa chụpụ ya maka mmehie anyị nke ọ mụtara. Ọ nakweere àjà na-enweghị ntụpọ, o biliri merie ili, ma biri ndụ zuru okè na Nna ya. Ya onwe ya kwa, nakweere obe, imeghi ihe ozo kari uche Nna ya. Obe bụ nzube nke ọbịbịa ya, ọ bụkwa ụzọ mgbapụta ụwa. Ya mere olee otu ndi si ekwu na Jizos anwughi n'obe?
Kraịst gosiputara na ya abughi ihe ojo ma obu mo zoro ezo. Enye ama owụt mmọ ke n̄wed emi odude ke ubọk esie. O gosiputara ya n'akuku ha ka ha hu ube nke ube nke kuru ya. Ha huru nrughari nke ntu ahu ma kwenye na onye guzo n'etiti ha abugh ihe di ka chi di iche dika chi, ma obu onye akpukporo onwe ya. Nwa Atụrụ Chineke bụ onye mmeri. Onye ahụ e gburu egbu meriri ọnwụ.
Nke nta nke nta, ndị na-eso ụzọ malitere ịghọta na Jizọs abụghị onye na-ese onyinyo ma ọ bụ onyinyo, kama ọ bụ ezi onye nọ na ha. Ụzọ ọhụrụ nke ịbụ onye bụ isi iyi nke ọṅụ ha. Ọ bụ ihe dị mma na anyị kwenyere ma ghọta na Jizọs bụ Onyenwe anyị dị ndụ, bilitere na ndị nwụrụ anwụ. A naghị agbahapụ anyị ụmụ mgbei. Nwanne anyị nke ya na Nna ya na Mmụọ Nsọ na-achị eluigwe na ala ruo mgbe ebighị ebi.Ọṅụ nke onye na-eso ụzọ na-etolite n'ihi mmeri Kraịst meriri ọnwụ. Kemgbe ahụ, ọ ghọrọ olileanya dị ndụ maka ndị na-ala n'iyi. Oghere na-emeghe abụghị ọgwụgwụ anyị, mana ndụ ya bụ nke anyị. Dika onye kwesiri ebube kwesiri itinye ya, "Mu onwem bu nbilite n'onwu na ndu: onye kwere na mu, obu ezie na o nwuru anwu, odi ndu, onye obula nke no ndu ma kwere nam, agagh anwu."
Mgbe ndị ahụ na-eso ụzọ ghọtara na Jizọs na-agbaghara ha mmehie ha, ha ṅụrịrị ọṅụ karị. Ọ na-emesi anyị obi ike na mkpuchi mmehie ya zuru ezu maka mgbaghara nke mmehie anyị. Ya mere ugbu a, anyị na Chineke dị n'udo site n'ọnwụ ya.
Ị na-ekere òkè n'ọṅụ ha na Ista? Ị na-ehulata n'ihu Onye ahụ bilitere, ebe ọ bụ na ọ nọ, na-enye gị olileanya ma na-agbagha mgbaghara gị? Jizọs dị ndụ, ọṅụ bụkwa òkè anyị. Ya mere, Pọl onyeozi na-agwa ụka otú a, "Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'Onyenwe anyị mgbe niile, ọzọ kwa, m na-aṅụrị ọṅụ: ka nụ ịdị nwayọọ gị mara mmadụ niile." Onyenwe anyị dị nso."
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-enwe obi ụtọ na-ekele gị, n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ olileanya anyị ma nye anyị ihe maka ndụ anyị. Ọrịa gị na-egosi anyị na ndụ gị na-enye anyị ndụ. Ka ala eze gi bia, ma mmeri gi mezuru, ka otutu we si na onwu bilie rue nmehie ma we di ndu nye otuto nke nbilite n'onwu gi.
Gịnị mere ndị ahụ na-eso ụzọ ji ṅụrịa ọṅụ?